Mihaona amin'ny andrasana amin'ny fiantsenana ho an'ny mpanjifa ve ianao amin'ity taona ity? | Martech Zone
Mihaona amin'ny andrasana amin'ny fiantsenana ho an'ny mpanjifa ve ianao amin'ity taona ity?
Sabotsy, Oktobra 25, 2014 Douglas Karr
Rahoviana ianao no tokony hanomboka fampiroboroboana ny fialantsasatra? Mikasa ny hanao fampielezan-kevitra amin'ny Internet ve ianao? Manatsara ny tranokalanao ve ianao mba hahafahan'ny mpanjifa an-tserasera mahita hevitra fanomezana mora foana? Inona no ataonao mba hitaomana ny mpiantsena izay showrooming hanao fividianana eo no eo eo? Manana fampahalalana momba ny vokatra ampy ao amin'ny tranokalanao ve ianao? Ny efitrano fampirantiana an-tserasera ve dia ampifandraisina amin'ny famatsiana tahiry anao? Moa ve mahafinaritra ny findainao sy ny takelakao amin'ny Internet?
Ny SDL dia nanadihady mpanjifa maherin'ny 3,000 any Etazonia, France, Germany, Netherlands, United Kingdom, ary Australia. Ity fikarohana ity dia mijery manokana amin'ny vanim-potoanan'ny fialantsasatra ho avy sy ny fifandraisan'ny mpanjifa ankehitriny amin'ny marika, toerana tena ifandraisan'izy ireo ary ny fomba fampiasan'ireo mpivarotra am-barotra teknika vaovao sy vaovao hanaovan-tsika.
Ireto misy fanontaniana lehibe ilainao handraisana andraikitra ankehitriny rehefa miroso amin'ny hafainganam-pandeha tanteraka isika amin'ny vanin-taona fiantsenana fialantsasatra 2014! Tsindrio ny infographic raha hisintona fampahalalana fanampiny momba ny fanadihadiana.
Tags: 2014 fialantsasatrafanadihadiana an'ny mpanjifahevitra fanomezanafivarotana fialantsasatramanaikysdlshowroomingtakelaka